musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Laos Kuputsa Nhau » Centara Mahotera: Mahotera matatu matsva muLaos
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Laos Kuputsa Nhau • Resorts • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Centara Hotels & Resorts, r, yakazivisa kuti yakasaina manejimendi manejimendi yezvivakwa zvitatu zvitsva zvine makiyi 216 akabatanidzwa, neAsia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd (AIDC), bhizinesi rakasimbiswa muLaos.
Munzvimbo yeUNESCO World Heritage saiti yeLuang Prabang, Centara inoronga kuvhura yepamusoro upscale Centara Grand Luang Prabang uye yepakati-kati Centra nepfuma chivakwa cheCentara, zvese zviri padyo nepakati petaundi. Imba yechitatu ichave iri pasi peiyo nyowani mararamende eCentara, COSI, ichipa kune chikamu chiri kukura chevakabatana, vanoda rusununguko vafambi. Inomiririra chakasarudzika chipiro muVientiane, iro guta guru reLaotian.
Chibvumirano che manejimendi chinouya apo Laos inotangisa zvirongwa zvitsva zvekusimudzira kushanya. Mumakore achangopfuura, hurumende yeLao PDR yauya kuzotarisa kushanya senge chikamu chekutanga chekutyaira kusimudzira hupfumi hwevanhu. Inotarisira kukwezva vashanyi vanosvika mamirioni mashanu mu5 uye kuwedzera huwandu mumakore anotevera neChiratidziro cheLaos pasi pechiratidziro "Simply Beautiful." Makomo anoyevedza emunyika, mataundi emuchadenga, uye hushamwari hwakaderera zviri kuwanikwa nevashanyi veThai, Chinese neWestern. Uye ine chinhu chimwe chete kunyanya mukufarira kwayo: kukosha kwakanyanya. Sekureva kweshumo nyowani kubva kuSwitzerland-based World Economic Forum, Laos inosvika gumi nemanath pakati penyika gumi nematanhatu mumakwikwi emitengo.
"Kubatana uku neAIDC mukana wakanaka wekuwedzera tsoka dzedu kuti dzive nyika yakasarudzika," akadaro Centara CEO Thirayuth Chirathivat. "Laos iri pane runyorwa rwevazhinji vanofamba kuenda kunzvimbo ino, uye tinoda kuvashandira nenzvimbo dzekugara dzakasiyana uye dzakasiyana kuti zvienderane neruzivo rwekufamba rwavari kutsvaga."
Luang Prabang iguta rakachengetedzwa zvakanaka, rekare pakunamata panosangana nzizi dzeKhan neMekong. Kunyangwe ichishandiswa zvakanaka nendege dzakananga kunhandare yendege uye zvigadzirwa zvemazuva ano, inorarama kusvika pachinzvimbo chayo cheWorld Heritage netembere dzakanaka uye hupenyu hwetsika hwerwizi. Mabhasikoro anodarika mota. Vanonaka mabhagetti, macroissants, maresitorendi uye maresitorendi eFrance zvinoratidza munhoroondo yeFrance yekoloni muLuang Prabang neVientiane.
Pheutsapha Phoummasak, Mutungamiri weAIDC Laos akadaro "Tiri kufara kubatana naCentara kuunza zvigadzirwa zvavo zvakavimbika kumaguta makuru aya nekuenderera mberi nekusimudzira kugona kweLaos. Luang Prabang neVientiane inzvimbo dzakakurumbira kune vese vafambi veThai nevekunze nekuda kwekusanganisa kwavo nhoroondo, nzvimbo dzinoyevedza uye hunhu hunonakidza ”
Aya mahotera matatu matsva ndihwo humbowo hwazvino hwechirongwa chekuwedzera chaCentara, icho chinoda kupamhidzira huwandu hwezvivakwa zviri pasi pevatariri mukati memakore mashanu anotevera. Ichi chiitiko chazvino chichaona kuwanda kwehotera yeCentara muLaos kusvika ina neCentara Plumeria Resort Pakse yatove pasi pekugadzirwa uye yakarongerwa kuvhurwa muna 2020.